Bahrain: Andron’ny Mpifankatia sa Andron’ny Hatezerana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jolay 2018 11:57 GMT
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana 2011 tao Bahrain ity lahatsoratra ity.
Ao Bahraina, sady an-tambajotra no tsia, naneho ny firaisankinany amin'ireo Ejiptiana ny mponina, tamin'ny fanaovana hetsi-panoherana tao amin'ny Masoivoho Ejitpiana tamin'ny 4 Febroary. Na dia tena hetsika firaisankina tamin'ny ankapobeny aza ilay fivoriana, fahafahana ho mba hanehoan'ireo mpanohitra ao Bahrain izay manahirana azy manokana ilay hetsi-panoherana –izay nekena niaraka tamin'ny fanomezandalana avy amin'ny fanjakana.
Sary avy amin'i malyousif, mpampiasa Flickr
Am-panararaotana ny antsoina hoe ”fiantefa domino” tao amin'ny tontolo arabo, miantso ny 14 Febroary ho an'ny ”Andron'ny Hatezerana” ao amin'ny fireneny ny mponina sasany ao Bahrain. Ao amin'ny Facebook, miantso ny 14 ho toy ny ”andron'ny revolisiona” ny vondrona iray, raha toa ka manao fanambarana mazava momba ny fangatahan'izy ireo ny tranonkalan‘ny vondrona Bahrain, Youth for Freedom. Ao amin'ny blaoginy, miresaka momba ny mety ho dikan'ny fikomiana ao Bahrain i Mahmood:
Niafara tamin'ny iray tena akaiky anay ny fikarohana kely malakilaky momba ireo ” fifamotoanana tselatra” tao amin'ny tontolo Arabo; ny fahatsiarovana ny fanambarana ireo nosin'i Bahrain ireo ho toy ny Fanjakam-panjaka. Mazava ho azy fa ny 14 Febroary izany fifamotoanana izany, afaka herinandro vitsivitsy.
Hampihena ny fankalazany amin'izao vanim-potoana izao ny fanjakana manantsaina. Noho izany, mazava ho azy fa handamina ny mponiny ary hampiseho amin'izy ireo hoe tonga dia ampidirin'ny fanjakana manantsaina kokoa, amin'ny fomba azo tsapain-tanana, ireo fanavaozana efa nampanantenainy taloha, tsy ho fanatsarana miserana fotsiny ny fahatsapan'ny vahoakany, fa mba hitazonana ny fampanantenany fotsiny.
Inona no tian'ireo vahoaka ao Bahrain? Miaina anatin'ny maha-izy azy ary ny hanajana ny zony fototra amin'ny maha-olombelona sy ny fahaizany. Mba handikana izany ho amin'ny fiteny mora ampiasana, izaho manokana dia mihevitra fa ny fanambaràna ny kaomitin'ny marina sy fampihavanana tsy miangatra miaraka amin'ireo fahefana mahomby rehetra, ny fanafoanana ireo lalàna ifanolanana, indrindra ny 56/2002 sy ny fampiharana ny lalàna mikasika ny fahalalahana amin'ny fanaovana gazety, manana fikambanana sy maneho hevitra, no zavatra voalohany indrindra tokony hatao.
Ho tonga saina amin'ireo fihetsehampo ireo ary hanaiky ireo fangatahana mitombina ireo ve ny fanjakana? Indrindra rehefa mihevitra ianao fa hanamafy ny toerany sy hampaharitra ny fanjakany ireo singa fototra ireo?
Tsy fantatro. Taorian'ny am-polon-taona maro nampanantenana, mahatsiaro aho fa tena fotoana izao hanambaràna / hanamafisana ireny fampanantenana ireny.
Ny hisiana korontana maromaro ato amin'ny firenena no zavatra farany indrindra tadiavinay. Leo be izahay.
Sary hita tao amin'ny Vondrona Facebook-n'ny Fikomiana tamin'ny 14 Febroary
Tao amin'ny Twitter, miady hevitra momba izany ireo Bahrainita. Manaiky ny @BahrainiTweets:
ny fanohizana ny fanavaozana sy olona be herim-po hiady amin'ny Kolikoly no ilain'i Bahrain, fa tsy adala miezaka ny hanimba ny Fetin'ny Mpifankatia miaraka amin'ny kodiarana mirehitra !! #14febroary
Zavatra hafa kosa no manahirana ny @FreedomPrayers:
Mba manontany tena aho hoe iza no mikarakara ny andron'ny hatezerana ny #14febroary raha toa ka efa voafonja daholo ny ”mpampihorohoro” REHETRA, raha toa ka nanao tsara ny asany ry zareo ao amin'ny ”fiarovana nasionaly”. #Bahrain
Hetsika ataon'ny fanjakana mba hampanginana ireo hetsi-panoherana no hitan'i @instajoker:
Ho fiomanana mialoha amin'ny hetsi-pahorena amin'ny #14Febroary, nanambara ny mpanjaka Bahrain fa hampiditra 100 tapitrisa dinars izy mba ho fanohanana ara-bola ao anatin'ny tetibola!
Farany, mametraka fanontaniana ara-potoana tsara i @emoodz:
Nampitambatra ny silamo sy ny kristiana tao Ejipta ny fankahalana an'i Mubarak, inona no ilaina mba hampitambatra ny sionita sy ny shiita ao #Bahrain?